China Portable Insect Repelling Lamp မီးအိမ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ထမင်းစားချိန်
ပိုးသတ် & သန့်စင်
ဖျော်ဖြေမှုတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ခေတ်မီပြီးလက်တွေ့ကျသည်။ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ USB အားသွင်းခြင်း၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ တွန်းလှန်အရည်ဖြင့်သဘာဝလုံခြုံပြီးထိရောက်မှုရှိပြီးမိခင်နှင့်သန္ဓေသားအသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ နွေးထွေးပြီးပျော့ပျောင်းသောညအလင်းရောင်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောအချိန် ၁၀.၀ နာရီချိန်ညှိခြင်း။2 အတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်3မီတာအကာအကွယ်၏ပြင်ပဇုန်။
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 77 * 76 * 138mm
ထိန်းချုပ်ရာနေရာ ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှု (၁၀ နာရီကြာချိန်)
ကဘ 400 ဂရမ်
လျှောက်လွှာAreaရိယာ ၃၀ မီတာ (အိမ်တွင်း)၊ ၃ မီတာ (အိမ်ပြင်)
ထုပ်ပိုးအတိုင်းအတာ 515X415X415mm（40PCS / သေတ္တာ
1. ဖက်ရှင်နှင့်လက်တွေ့ကျသော၊ ဖျော်ဖြေမှုအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံး။
အသုံးပြုသူအဆင်ပြေစေရန်ခလုတ်ကိုစတင်ပါ။ USB အားသွင်းခြင်း၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တွန်းလှန်အရည်သည်သဘာဝလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုရှိပြီးမိခင်နှင့်သန္ဓေသားအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ နွေးထွေးပျော့ပျောင်းသောညအလင်းရောင်၊ 10 နာရီအချိန် setting ကို။ ခြင်ဆေး ၃၀ ကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်ခြင်များကိုထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်သည်2 အတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်3မီတာအကာအကွယ်၏ပြင်ပဇုန်။
ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်ချွေတာသည့်ခြင်တွန်းလှန်စနစ်ကိုဖွင့်ရန်ခလုတ်သည်အစိမ်းရောင်မီးကိုဖွင့်သည်။ 10 နာရီအကြာတွင်အလိုအလျောက်ပိတ်။
မီတာ ၃၀ ဖန်တီးခြင်း2 အတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ် ၃ မီတာအကာအကွယ်ပေးသည့်အပြင်ဘက်တွင်ဇုံ၊ တံခါး၊ နေရာ၊ မြက်ခင်းပြင်၊ တံခါးပေါက်၊ ရေကန်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအပြင်းထန်ဆုံးအစက်အပြောက်များတွင်ခြင်များကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်အသုံးပြုသောသက်သေပြနည်းပညာများ၊ 10 နာရီကာကွယ်မှုပေးပါသည်။
4. စတိုင်, အဆင်ပြေ, ခရီးဆောင်
ယုံကြည်ရသောခြင်တွန်းလှန်မီးအိမ်သည်အိမ်ပိုင်ရှင်အသစ်၊ အိမ်ရှင်မ၊ အငြိမ်းစား၊ ကောလိပ်ဘွဲ့ရ၊ ဥယျာဉ်မှူးသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
၅။ လူနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် ၁၀၀% လုံခြုံသည်
အင်းဆက်ပိုးမွှားကိုတိုက်ထုတ်သည့်မီးအိမ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့်ကလေးအတွက်လုံခြုံသည်။ အဆိပ်မရှိ၊ အဆိပ်မရှိ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်မရှိ၊ ပိုးမွှားများကိုသန့်ရှင်းရေးမလိုအပ်ပါ၊ သင့်အား ၁၀၀% လုံခြုံမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သောအိမ်ကိုပေးသည်။
ရှေ့သို့ အဝတ်အစား Steamer
နောက်တစ်ခု: Mini Portable Air Cooler
လက်ဝတ်ရတနာ Ultrasonic သန့်ရှင်းရေး
Meiling / MAK အကြောင်း
ဂွမ်ဒေါင်း Meiling အင်တာနက်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်